Mifanakaiky dia akaiky ny isam-bato amin’ny fifidianana solombavambahoaka, Ho azon’ny Antokon’ny Kongresy tafala amin’ny BJP ve ny fanjakana Assam? · Global Voices teny Malagasy
Mety holazaina ny 2 mey ny voka-pifidianana
Voadika ny 03 Mey 2021 4:58 GMT
Mpirotsaka an-tsitrapo mampanao fitilian-kafanana amin'ny mpifidy aoamin'ny biraom-pifidianana iray mandritra ny fizarana voalohany amin'ny fifidianana Assam elections ao Kaliabhomora, distrikan'i Tezpur, tamin'ny 27 marsa 2021. Saripikan'ny Vaomieram-pifidianan'India mandalo Wikimedia. |Government Open Data License – India (GODL).
Ny fifidianana solombavambahoaka farany vao vita tao amin'ny fanjakana Assam, India no iray amin'ireo izay nifaninanana indrindra tao anatin'ny taompolo maromaro, fa tsy azo vinavinaina mihitsy izay mety ho mpandresy amin'ny voka-pifidianana alohan'ny hanambarana azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny 2 Mey.
Nanjaka tamin'ny antenimiera mpanao lalàna ao Assam ny Kongresy Nasionaly Indianina (INC) nanomboka ny taona 1951 ka hatramin'ny 2016 rehefa nivadika ho an'ny Antoko Bharatiya Janata (BJP) an'ny praiminisitra Narendra Modi ny fifehezana. Matetika ny politikan'i Assam dia misy fiantraikany amin'ireo fanjakana avaratra atsinanana ary, amin'ny maha fanjakana an-tsisintany azy, dia mitana atoerana lehibe amin'ny fifandraisan'i India amin'ireo firenena mifanila aminy koa.
Voamariky ny fisarahan-kevitra lalina ara-pinoana ny latsa-bato tamin'ity taona ity, izay nitontosaina tanaty dingana telo nanomboka ny 27 marsa, nahitana farangoteny toy ny #AssamUnderMughalsAttack, ho fanondroana ireo Silamo nanjaka tao India tamin'ny vanim-potoana antenantenany, izay niteraka fandisoam-baovao anjotra.
Ny INC no nitarika ny mandatehezana liberaly manana mpiara-dia lehibe indrindra amin'ny fifidianana, izay nahitana ny Mandatehezana Demaokratika Tafaray manerana an'i India, ny Mandatehezam-Bahoaka Bodoland, ny Rashtriya Janata Dal, ary ny antoko komonista telo ao India. Ny zava-dehibe vitan'ny “Grand Alliance”, araka ny iantsoana azy, dia ny fampiraisana ny latsa-baton'ny silamo, izay nifampizara tao amin'i Kongresy Nasionaly Indianina (INC) sy ny Mandatehezana Demaokratika Tafaray manerana an'i India. Mihoatra ny 30 isanjaton'ny mponina ao Assam ny Silamo.
Antokom-paritra vaovao roa no nifaninana tamin'ny fifidianana, ny Assam Jatiya Parishad sy ny Raijor Dol, izay samy avy amin'ny firehan-kevitra nasionalista Assam sy fomba fijery liberaly na laika. Ity voalohany dia nahazo fanohanana mavitrika avy amin'ny Sendikan'ny Mpianatra Assam Rehetra, izay fikambanana manam-panintonana indrindra ao amin'ny fanjakana, ary ity farany kosa dia notohanan'ny fikambanana tantsaha sy indizeny. Niara-dia ny roa tonta.
Ankoatra ny fampanantenany hamorona asan'ny governemanta 500.000, ny fampanantenan'ny INC voalohany indrindra dia ny hamorona lalàm-panjakana “hanafoanana” ny lalàna fanitsiana ny zom-pirenena (CAA), lalàna Indiana iray mampiady hevitra mandrara ny Silamo saingy mamela ny Haindò, ny Sikhs, Boddhista, Jains, Parsis na ny Kristiana any amin'ny firenena mifanila aminy ho afa-misitraka ny zom-pirenena Indiana.
Mety hahatonga Assam miisa 1,9 tapitrisa tsy hanana [zom-pirenena] [mg] ny fanavaozana ny lisitra mahaolompirenena nasionaly (NRC) amin'ny taona 2019, tobintahiry nasionaly misy anarana sy fampahalalana mifandraika amin'ny olom-pirenena indiana rehetra. Mba hahatonga azy ireo ho tafiditra ao amin'ny NRC, ny olom-pirenena dia tsy maintsy manaporofo fa teraka tany India talohan'ny 1971 izy ireo na ny razany, saingy maro no tsy manana antontan-taratasy toa izany. Raha miditra an-tsehatra ny CAA, dia ampahany maro amin'ireo olona tsy manana zom-pirenena sady tsy Silamo ara-teknika ireo no afa-misitraka zom-pirenena Indiana ary maro ny Assam no manohitra izany.
Bengali ny ankamaroan'ny mponina ao Assam, ary Silamo ny ankamaroany izay matetika tondroina diso ho mpifindramonina Bangladeshita.
Vakio ihany koa teny malagasy [mg]: Olona an-tapitrisany ao Assam avaratra atsinanan'i India atahorana ho very zom-pirenena
Nolalaovin'ny Assam Jatiya Parishad sy ny Raijor Dol koa ny fihetseham-po manohitra ny CAA sady nanameloka ny BJP ho mandrisika fisaraham-bazana.
Mandritra izany fotoana izany, nilaza ny BJP fa manandrana “manapotika an'i Assam” ny INC amin'ny alàlan'ny fiarahana dia amin'i Badruddin Ajmal mpitarika silamo Maulana, avy amin'ny Mandatehezana Demaokratika Rehetra Tafaray Manerana an'India.
Nisy horonantsary malaza iray mampiseho ny fanambaran'ny zokiolona mpitarika ny BJP sady minisi-panjakana manan-kery ao Assam Himanta Biswa Sharma fa “adin'ny sivilizasiona” ny fifidianana, mety hidika hoe Haindò sy Silamo.
Nampanantena ihany koa ny BJP fa hanafoana trosa 1,6 miliara USD amin'ny trosan'ny vehivavy Assam an-tapitrisany any amin'ireo andrim-pitantanam-bola madinika (microfinance). Nasehon'ny antoko eo amin'ny fitondrana ihany koa ireo tetikasa fotodrafitrasa natombony nandritra ny nitantanany ny fanaovan-dalàna tao Assam.
Andro vitsy sisa tavela amin'ny fanisam-bato, avo ny fanantenan'ireo mpiara-dia roa tonta hahazoana fandresena.